AnyDWG, ukuguqula iifayile ze-dwg ngaphandle kokuba ne-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Nayiphi na iWindows, ukuguqula iifayile ze-dwg ngaphandle kokuba ne-AutoCAD
AnyDWG ngumgca wezixhobo zoqoqosho ezenziwe ukuguqula iifayile ze-AutoCAD kwiifom ezahlukeneyo.
Phakathi kwezona zinto zisebenza kakuhle nezi zixhobo zincinci, kukuba zivumela ukuguqula iifomathi ze-dwg zisuka kwi-AutoCAD R2.5 ziye kwi-AutoCAD 2009. Ikwahlawuleka kwakhona ukuba iinkqubo zenziwa ngobuninzi, ezaziwa njenge-batch.
Ininzi iinkqubo ziqukethe iphaneli efanayo, ukhetho lokufaka iifayile ezizimele, ifolda epheleleyo, nokuba iifayile zikhuselwe ngephasiwedi njengoko kwenzeka ngeDWF, ifolda yokuya kunye nefomati yefayile.
Akukubi kwiinkampani okanye kubuchwephesha umsebenzi wabo ufuna uguquko olukhulu kunye nolwenza rhoqo. Izisombululo ezahlukeneyo zibandakanya:
DWG kwiDXF, ivumela utshintsho phakathi kwezi fomati ngeendlela zombini, kunye neenguqulelo ezisuka kwi-R2.5 ukuya ku-2009. Kuyenzeka ukongeza iifolda ezahlukeneyo zeefayile ze-dxf kunye ne-dwg.
DWG kwi-PDF, Kakade le nto inokwenziwa kwi-AutoCAD okanye kwi-Acrobat kodwa ukusetyenziswa kwesi sixhobo kukwazi ukuyenza kwi-batch, kwaye kunjalo, kuyabiza kakhulu.
DWG kwiSithombe, guqula kwiifom ze-dwg / dxf kwiifom zithombe: i-TIF (i-TIFF), i-JPG (JPEG), i-BMP, i-GIF, i-PNG, i-TGA, i-PCX, i-WMF kunye ne-EMF
PDF kwiCAD, oku kuguqula izinto ze vector ukusuka kwipdf ukuya kwi-dwg okanye i-dxf, iphinda ikhuphe imifanekiso eqhotyoshelweyo.
DWF kwiDWG, ivumela ukuguqula iifayile ze-dwf ukuya ku-dwg okanye i-dxf, isekela zonke iintlobo zezinto eziqulethwe kwiziqendu ze-dwf kwanamaphepha amaninzi.
DWG kwiDWF, ikuvumela ukuba wenze iifayile ze-dwf
Ukuqukumbela, izixhobo ezifanelekileyo zokusebenzisa iifayile ze-dwg ngaphandle kokuba ne-AutoCAD kwiinguqulelo ezahlukeneyo. Zonke zinokukhutshelwa kwinguqulelo yovavanyo ukusuka AnyDWG.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa unokufumana ezi zicelo kwiphepha AnyDWG.com
IGoogle Maps ungaxhunyiwe kwi-intanethi uze ulandele imifanekiso ekhoyo
Molo mhlobo, ndingathanda ukufumana okanye ukufumana ezona ndlela zibalaseleyo ze-lisc ze-autcad.
BiblioCAD, khuphela i-AutoCAD ibhloko kunye nezicwangciso